Jilaa caan ah oo la aqal galay gabar Soomaaliyeed (Daawo Sawirrada) - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Jilaa caan ah oo la aqal galay gabar Soomaaliyeed (Daawo Sawirrada)
Idiris Elba iyo Sabirin Dhore
Idiris iyo Sabrina Dhoorre ayaa is aroosay. Iyada oo heshiiskooda guurka uu dhacay sanadki 2018-kii, 26-ka April ee sanadkaasina ku iclaamiyey huteelka Ksar Char Bagh ee ku yaalla Marrakesh iney isguursanayaan.
Xafladda arooska marka ay dhaceysay, Sabrina Dhowre waxay soo xiratay dhar cad oo qoorta ka go’an oo ay caruusadaha xirtaan, Seygeedana wuxuu ku soo labbistay suud madoow shaar cad iyo taay madow isaga oo aad u dhoolla caddeynaya ayuuna ka qayb galay xafladdiisa arooska.
Maantana wuxuu arooskooda ka dhacay Mandarin Oriental oo looga diyaariyey xaflad aad loo soo agaasimay.
Haddaan dib u milicsanno waayaha Saabiriin iyo Idiris